Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sierra Leone dia nandefa mpizahatany japoney 4 ho an'ny Coronavirus
Miaraka amin'ny ventilator iray ao Siera Leone, Coronavirus dia mety hahafaty be. Niezaka mafy i Sierra Leone hampiroborobo ny firenena ho Hawaii vaovao any Afrika Andrefana, saingy tsy mbola tonga ny fotoana. Sierra Leone dia iray amin'ireo firenena vitsy tsy manana tranga Coronavirus na iray aza.
Androany dia nampahafantatra tamin'ny besinimaro ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily any Sierra Leone fa mpitsidika Japoney 4 no niditra an-tsambo fiaramanidina Kenyan Airways avy any Monrovia, Liberia ho any amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Freetown, tanànan'ny renivohitra Sierra Leone. Ny mpitantana ny tobin-tseranana Kenya Airways ao Freetown dia nampandre ny manam-pahefana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Freetown noho ny fiahiahiany fa mety ho voan'ny Corona Virus miorina amin'ny famantarana hita teo amin'ny sidina nataon'ny iray tamin'ireo mpandeha Japoney.
Nolavina avokoa ny teratany japoney efatra nidina an-tsambo tany Sierra Leone teny amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ary nandao an'i Sierra Leone tao Kenya Airways ireo mpandeha ireo. Ny mpandeha sisa dia navela nidina ary natokana ho karana.
Ny manampahefana sivily sivily Sierra Leone (SLCAA) dia nangataka tamin'ny vahoaka mba ho tony hatrany ary nanome toky ny vahoaka Sierra Leone ny fahavononan'ny maso ivoho hisorohana ny COVID-10 tsy hiditra ao amin'ny firenena.